रचनात्मकको रूपमा सहरहरूमा बस्न, शान्त हुनु फेसनशील छ क्रिएटिव अनलाइन
सबै क्षेत्र र क्षेत्रहरूमा जस्तै, त्यहाँ सधैं छ स्थान र साइटहरू अधिक लोकप्रियता, भविष्यवाणी र एक विशेष क्षेत्र मा प्रशंसा को साथ साइटहरू। हलिउडलाई अभिनेता र फिल्म निर्माताहरूका लागि अमेरिकी सपनाको शहर भनेर चिनिन्छ, अन्य शहरहरू आफ्नो रचनात्मक वर्गको लागि खडा हुन्छन्, जुन, मिलाउन, बसोबास गर्न र शहरमा रचनात्मक क्षेत्रमा उभिने व्यक्तित्वहरू र पेशेवरहरूको खोजी गर्न योगदान पुर्‍याउँछ। क्याच यी शहरहरू बीच तिनीहरू सधैं बाहिर उभिए ब्यूनस आयर्स, बार्सिलोना वा म्याड्रिड.
टोरन्टो विश्वविद्यालयको प्रोफेसर, प्रोफेसर खोज्न र हाइलाइट गर्न समर्पित रिचर्ड फ्लोरिडा, २००२ मा प्रकाशित एउटा पुस्तक लेखिएको थियो "क्रिएटिभ क्लासको उदय"। यस प्रकाशनमा हामी फेला पार्दछौं, उनको रायमा, व्यक्ति र समूह जसले आफूलाई इतिहासको नायक मान्दछन्।
1 "क्रिएटिभ क्लासको उदय" का मुख्य पात्रहरू
2 शहरहरू वा तिनीहरूका बासिन्दाहरू
3 रचनात्मक शहरहरूको छिमेक
"क्रिएटिभ क्लासको उदय" का मुख्य पात्रहरू
यस पुस्तकका मुख्य पात्रहरू ती हुन् मानिसहरु जो रचनात्मक क्षेत्र मा बाहिर खडा। अर्को शब्दहरु मा, जो सबै भन्दा बढी आय प्राप्त, सबै भन्दा राम्रो भुक्तान र सबै भन्दा बढी प्राप्त प्रभावशाली यी पेशेवर हुन झुकाव। उनीहरूको ज्ञान, सामाजिक सम्बन्ध वातावरणमा मूल्यवान तिनीहरू बसोबास गर्ने शहरहरूलाई यी सुविधाहरू प्रदान गर्नुहोस्.
शहरहरू वा तिनीहरूका बासिन्दाहरू
हामीले आफैलाई सोध्नु पर्छ यो शहरहरू वा उनीहरूका नागरिकहरू जसले एक स्थान सिर्जनात्मक बनाउँदछ। जे देखिएको छ, शहरले लडाई जित्नको लागि आफ्नो इलाकामा प्रतिष्ठित मानिसहरूलाई ठाँउ दिन जिम्मेवार छ। हाम्रो समाजमा रचनात्मक भर्तीका फाइदाहरू कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको रोजगारसँग जोडिएको छ। यसले सम्भावित उम्मेदवारहरू उत्पन्न गर्दछ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि हामी बस्दछौं प्रतिभा को लागी एक युद्ध रचनात्मक को।
रचनात्मक शहरहरूको छिमेक
एकाग्रता र रचनात्मक को मालीकरण वा बोहेमियन्स भनिने पनि ठूला शहरहरूको सानो नम्र छिमेकको रूपान्तरणको परिणाम हो। केहि स्पष्ट उदाहरणहरू कसरी स्थानहरू हुन् मालासाना, म्याड्रिडमा; वा जन्मे, बार्सिलोना मा। को लोकप्रिय यी मध्ये साइटहरूले उनीहरूको पसल र भाडाको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ, र त्यसैले, आफ्ना छिमेकीहरूलाई सार्दै उनीहरु भन्दा पुरानो योग्य पेशेवरहरु द्वारा प्रतिस्थापित। सारांशमा, हामी यो भन्न सक्छौं "चिसो" हुनु परम्परा भन्दा बढी तौल.
हामी देख्न सक्छौं अभियान यसले सृजनात्मकताको सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्दछ ब्यूनस आयर्स र यसको नागरिकहरूको आफ्नो छिमेकीलाई प्रमोट गर्नको लागि सहभागिता।
अन्तमा, हामीले त्यसलाई विचार गर्नुपर्दछ मापदण्डलाई बढावा दिनु भनेको यसको परिर्वतन गर्नु हो र एक चरम कहाँ पुग्नुहोस् यसको सार हराउन गरौं, ताकि एक पटक फेरि, आर्थिक चासो संस्कृति मा हावी। के यो यसको लायक छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » सहरहरू क्रिएटिभले पछि खोजेको शहरहरू